कम्प्युटर र ल्यापटप फास्ट बनाउन एसएसडीको प्रयोग गर्ने तरिका – Rapti Khabar
तपाईंले आजभन्दा केहि वर्ष अगाडी खरिद गरेको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा अवश्य पनि हार्ड डिस्क नै थियो । हार्ड डिस्क निकै पहिले देखि प्रयोग हुँदै आएको डिजिटल भण्डारणको लागि प्रयोग गरिएको उपकरण हो ।
यिनीहरु धेरै साइजमा उपलब्ध हुन्छन र खरिद गर्न पनि तुलनात्मक रुपले सस्ता हुन्छन । तर कम्प्युटर र ल्यापटपको जगतमा प्रोसेसरको स्पिडमा र र्यामको साइजमा भएको फड्कोले चाहिँ हार्ड डिस्कलाइ पछि पारिदियो । नयाँ प्रोसेसर भएको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा पनि हार्ड डिस्कको प्रयोग गरिएको खण्डमा सोचे जस्तो राम्रो परफरमेन्स पाउन सकिदैन ।
पुराना कम्प्युटर वा ल्यापटपलाई फास्ट चल्ने बनाउनका लागि एसएसडीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । एसएसडीहरु साधारण हार्ड डिस्कको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी फास्ट हुन्छन । महँगा एसएसडीहरु हार्ड डिस्कभन्दा ३० गुणासम्म पनि फास्ट हुनेगर्दछन् । ल्यापटप वा कम्प्युटरमा भइरहेको हार्ड डिस्क हटाएर उक्त हार्ड डिस्कको सट्टामा एसएसडी हाल्नु पर्ने हुन्छ । एसएसडी प्रयोग गर्नुका फाइदाहरु यस्ता छन्:
१. कम्प्युटर चाडो खुल्ने
हार्ड डिस्क भएको कम्प्युटरलाइ खुल्न जति समय लाग्छ, एसएसडी भएको कम्प्युटर खुल्नलाई त्योभन्दा ३ गुणासम्म कम समय लाग्छ । उदाहरणका लागि: ५४०० आरपीएम ( अर्थात् साधारण) हार्डडिस्कमा ३० सेकेन्ड लागेर खुल्ने कम्प्युटर, एसएसडी राख्नासाथ १० सेकेन्डभन्दा कममा खुल्न सुरुगर्छ ।
२. धेरै प्रोग्रामहरु एकैपटक चलाउन सजिलो बनाउने
एसएसडीको प्रयोगबाट धेरै एप र प्रोग्रामहरु चलाउन सजिलो हुन्छ । एउटा प्रोग्राम चलाउदा चलाउदै अर्कोमा स्विच गरेर चलाउने काम पनि द्रुत हुन्छ । एसएसडी भएको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा एन्टीभाइरस सफ्टवेयरको स्क्यान पनि निकै चाडो हुन्छ ।
३. प्रोग्रामहरु चाडो खुल्ने
हार्डडिस्क भएको कम्प्युटरमा फोटोशप खुल्न एक मिनटसम्म लाग्न सक्छ, तर त्यहि कम्प्युटरमा एसएसडी राखेपछि उक्त प्रोग्राम १०-१५ सेकेन्ड मै खुल्छ र चलाउन तैयार हुन्छ । यसरी नै एसएसडी भएको कम्प्युटर वा ल्यापटपमा सम्पूर्ण प्रोग्रामहरु चाडैं खुल्छन् र चलाउने समयमा पनि राम्रोसँग ह्यांग नभई चल्छन ।
४. गेमिंगमा सुधार
ठूला गेमहरु इन्स्टल हुन घण्टासम्म लाग्न सक्छ । तर एसएसडीको प्रयोग पछि त्यहि गेम पनि केहि मिनट मै इन्स्टल हुन्छ । प्रोग्रामहरु चाडै खुलेजस्तै एसएसडीको प्रयोगबाट गेमहरु पनि चाडैं खुल्न सुरु गर्छन र खेल्ने बेलामा पनि राम्रोसंग चलिरहन्छन् ।
एसएसडीहरु हार्डडिस्कको तुलनामा निकै सुरक्षित हुन्छन । हार्ड डिस्कहरु मुख्यतः खस्ने बित्तिकै बिग्रने गर्छन तर एसएसडी भने खसेर खासै बिग्रदैन । एसएसडीमा म्याग्नेटिक ( चुम्बकीय ) प्लेटहरु नहुने भएकाले पनि यिनीहरुमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक झट्काबाट डेटा हराउने वा बिग्रने डर हुदैन, जुन हार्डडिस्कमा हुन्छ ।
६. शान्त र नतात्ने
एसएसडीमा घुम्ने पुर्जाहरु हुँदैनन । यसर्थ प्रयोगको बेलामा आवाज आउदैन र प्रयोगको समयमा हार्ड डिक्सको जस्तो ताप निकाल्दैन ।
एसएसडी प्रयोगका फाइदा नै फाइदा छन् । प्रयोगको समयमा एसएसडी हार्ड डिस्कभन्दा सधै अब्बल नै ठहरिनेछ । तर पनि एसएसडी खरिद गर्दा यी दुइ कुरा भने जानीरहनु पर्ने हुन्छ :
१. एसएसडी महँगा हुन्छन्
एसएसडी हार्ड डिस्कको तुलनामा निकै महँगा हुन्छन । उदाहरणका लागि : नेरु ६ हजारमा १ टेराबाइट अर्थात् हजार जीबीको हार्डडिस्क खरिद गर्न सकिन्छ । तर उक्त मूल्यमा केवल २४० जीबीको मात्र एसएसडी खरिद गर्न सकिन्छ – जुन साइज कतिपय प्रयोगकर्ताका लागि निकै कम हो ।
साइज र परफरमेन्सको सहि तालमेल मिलाउनलाइ कम्प्युटरमा एसएसडी र हार्डडिस्क दुवै राख्नु उचित हुन्छ – विन्डोज र प्रोग्रामहरु एसएसडीमा राख्ने भने गेम, भिडियो, संगीत र आदि फाइलहरु चाहिँ हार्ड डिस्कमा राख्ने ।
२. एसएसडी मात्र फास्ट भएर कम्प्युटर फास्ट हुँदैन
एसएसडीले कम्प्युटर फास्ट चल्ने त बनाउछ तर कम्प्युटर फास्ट चल्ने बनाउनलाइ एसएसडी मात्र इन्स्टल गरेर पनि हुँदैन । यदि तपाईंको कम्प्युटरमा निकै पुरानो प्रोसेसर छ – उदाहरणका लागि पेन्टियम ४, कोर टु डुवो, एएमडी फिनम आदि जस्ता प्रोसेसर – छन् भने तपाईंले एसएसडी हाल्नुको कुनै अर्थ नै छैन । यस्तो अवस्थामा कम्प्युटर स्लो हुनुमा हार्ड डिस्कको दोष नभएर प्रोसेसरको दोष हो ।
यदि टास्क म्यानेजरमा १००% डिस्क युजेज प्राय देख्ने गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईंले एसएसडी प्रयोग गर्नु उचित ठहरिन्छ ।
यस वर्ष असोज २ गते शुक्रवारदेखि ३० गते शुक्रवारसम्म मलमास अथवा अधिकमास परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ । वर्षमा सौर र चान्द्रमास हुन्छन् । दुवैलाई समन्वय गर्न ३२ महिना १६ दिन १ घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वा अधिकमास आउँछ । एउटा औंसीदेखि अर्को औंसीसम्म संक्रान्ति छैन […]
ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यो नेपालीको आमसमस्या हो । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन् । यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी […]
कोरोना परीक्षणको शुल्क ह्वात्तै घट्यो, अब कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षणको शुल्क घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार आइतबारबाटै लागू हुनेगरी कोरोना परीक्षणको शुल्क घटेको हो। अब ४४ सयमा पीसीआर परीक्षण गराउन सकिन्छ। यसअघि सरकारले ५५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सँगै सरकारले लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने भएको […]